Amakhambi – iAfrika
Ukwelapha izilonda zangaphakathi
Ziningi izinhlobo zokugula esibhekana nazo zingabantu. Ukugula ke kubangelwa izinhlobo ezahlukene zamagciwane. Zikhona izindlela ezimbalwa zokugwema ukugula kodwa nazo aziwona umqamulojuqu. Okuye ukugula okujwayelekile kubantu abadala kanye nabantwana kuba izilonda. Izilonda zidalwa izinto ezahlukene, kuyaba indawo umuntu ahlala kuyo, umzimba omubi othatha ukugula kalula bese kuba kanye nokuthelelwa omunye umuntu. Indlela yokwelapha izilonda Ziningi izindlela … Read more
Tags Amakhambi, Izilonda, Izilonda zangaphakathi
Ziningi izinhlobo zezifo ezisiphathayo futhi zibangelwa izinto ezahlukene, umkhuhlane ungezinye zezifo ezejwayelekile. Ziningi ke izindlela zokwelapha umkhuhlane, singabala khona ukugquma/ukufutha, ukuphalaza nokunye. Kuleli khasi sithi ake sibhunge ngezindlela zokuwelapha eziphephile zezingane ezincane kanye nabadala. Nawa amakhambi okwelapha umkhuhlane, okungamakhambi ajwayelekile kwezinye izindawo. Inhlaba Inhlaba ngesinye sezihlahla esingakhethi ndawo yokumila, simila enkangala kanye nashlanzeni. Inhlaba ke … Read more
Tags Amakhambi, Ibozana, Inhlaba, Isiqunga, Umsilinga, Umsuzwane
*Isexwayiso: Okubalulwa ngezansi yilokho abanye babantu basemandulo ababezikhethela khona njengendlela yokuphila. Okuningi kwako sekuguquke futhi sekubhekwa ngamanye amehlo namuhla futhi kwamukeleka ngendlela ehlukile kunaleyo yasemandulo. Konke okwethulwa kule sizindalwazi kudaliwe ngabantu nje futhi akuqinisekisiwe. Emandulo bekuthi uma kuke kwadunguzela inkosi, izanusi zibhule zibheke ukuthi konakalephi, ngisho nazo izinyanga bezivuka zizithathe zizama ukubhula umlilo wokudunguzela kwenkosi. … Read more
Tags Amakhambi, Imithi
Izinto zamasiko zihlale zihlale ziguquke ngakho ukuhamba kweminyaka, ngoba lokho kusho ukuthi uzalo olusha lufika nezindlela ezintsha zokwenza izinto eziphathelene nawo amasiko nemigubho yawo. Lokhu kusho ukuthi nasemandulo bezikhona izinto ebezenziwa khona ezingasenziwa manje, kanti-ke futhi kukhona nobekusho osekwenziwa manje phambilini obekungenziwa. Angeke sigxile kakhulu ebuhleni nasebubini bokuguqula izinto zamasiko ngoba phela izikhathi zokukhulu nazo … Read more